Ujyaalo Sandesh | » कसरी लामो आयु बाँच्छन् चिनियाँहरु ? कसरी लामो आयु बाँच्छन् चिनियाँहरु ? – Ujyaalo Sandesh
कसरी लामो आयु बाँच्छन् चिनियाँहरु ?
३ पुस (काठमाण्डौं)
चीनको बामा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चान ९० वर्षसम्ममा पनि अझै फुर्तिला छन् । उनीमात्रै होइन, ८ वटा सन्तानकी आमा बनेकी चानकी श्रीमती समेत अहिलेसम्म अस्पताल जानु परेको छन । यसको राज के हो त ? बामा गाउँबासीहरु सय वर्षभन्दा धेरै स्वस्थ भएर जिउनुको कारण के हो ?
नेपालमा शताब्दी पुरुष सत्य मोहन जोशीको १०० वर्षसम्म बाँच्नुको राज भनेको उनको नियमित र एकै किसिमको स्वस्थ खानेकुरा हो । तर, चिनियाँहरुले भने आफू लामो समयसम्म बाँच्नुको कारण केवल नियमित खाना नै मुख्य रहेको जोशीले अनलाइनखबरसँग बताएका थिए । त्यस्तै, खाना र पारिवारिक प्रेमको कारण धेरै वर्षसम्म बाँच्ने चिनियाहरुपनि जोशीले जस्तै दीर्घ जीवनको लागि परिवारहरुको माया र सँगै बित्ने पारिवारिक समय नै मुख्य रहेको बताउने गर्छन् । यही गाउँ हो जहाँ वर्षेनी लाखौं पर्यटकहरु उनीहरुको दीर्घ जीवनको राज पत्ता लगाउनको लागि आउने गर्छन् । उनीहरु त्यो क्षेत्रमा सुन्दर वातावरणको दृश्यावलोकनको लागि मात्रै नभएर लामो समय जिउने कला सिक्नको लागि धेरैजना त्यहाँ आउने गर्छन् ।
त्यही गाउँमा भेटिएका एक बृद्धि हुन् हुंग मकुन । उनी सो गाउँका एक ब्राण्ड एम्बेस्डर हुन् भन्दा पनि फरक नपर्ला । व्यापारिक भाषामा भन्दा उनी सो गाउँका ‘सो केश’ हुन् । उनलाई नै हेर्नको लागि विश्वका विभिन्न स्थानहरुबाट समेत मानिसहरु आउने गरेका छन् । उनको उमेर कति भयो ? भनेर उनका आफन्तहरुले गन्न नै छाडिसकेका छन् । १०० वर्षको उमेरसम्म गनेकाहरुले त्यसपछि गन्न नै छाडे । उनीहरुले गन्न छाडेको पनि धेरै समय भइसक्यो । स्थानीय बृद्धबृद्धाहरुलाई ब्राण्ड एम्मेस्डरको रुपमा विकास गराइसकेपछि स्थानीय बासिन्दाले महसुस गरे कि ‘दीर्घायु जीवन त व्यक्तिगत मात्रै नभएर आर्थिक रुपमा समेत लाभदायक हुँदो रहेछ ।’ त्यसपछि उनीहरुले त्यही १०० वर्ष नाघेकाहरुलाई देखाएर त्यहाँ पर्यटनको समेत विकास गरे ।
चान आफ्नो लामो जीवन र खुशी जीवनको श्रेय आफ्नो साधारण दिनचर्यालाई दिने गर्छन् । उनी खानाको रुपमा चामलको भात र लसुनको तरकारी खान्छन् । अमेरिकी अनुसन्धान संस्था सिआइएको २०१५ को रिपोर्ट अनुसार पश्चिमी युरोपमा रहेको विश्वको सबैभन्दा सानो देशमध्ये दोस्रो स्थानमा पर्ने मोनाको देशका मानिसहरु विश्वमा सबैभन्दा धेरै औषत् ८९ वर्ष बाच्ने गरेका छन् । दोस्रोमा रहेको जापानका मानिसहरु औषत्मा ८४ वर्ष बाच्ने गरेका छन् । यसमा पनि कैयौं मानिसहरु १०० वर्ष कटेका हुने गर्छन् । मानिसहरु धेरै वर्ष बाँच्नेमा सिंगापुर तेस्रो स्थानमा पर्छ । चौथो स्थानमा मकाओ पर्ने गर्छ ।
कहिलेकाँही, पैसाले खुशी किन्न सक्छ
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, मकाउबासीलाई त्यस्तो दीर्घ आयु दिने मुख्य स्रोत क्यासिनो हो । क्यासिनोले नै यहाँको अर्थतन्त्रलाई समेत माथि उठाएको छ । त्यही क्यासिनोबाट उठाएको राजश्वले नै मकाओमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, मासिक पेन्सन र ६५ वर्षभन्दा माथि उमेरका सबै नागरिकलाई वाषिर्क नगद अनुदान समेत प्रदान गर्ने गरिएको छ ।
बुढेसकालका लागि सहरभरी झण्डै दुई दर्जन यस्ता केन्द्रहरु समेत रहेका छन् जहाँ बुढेशकालमा टहलाउन, आनन्द लिन, सामाजिक कार्यहरुको अवलोकन गर्न, खाजा खान, खेल खेल्नको लागि पनि निःशुल्क पाउँछन् । यही नै दीर्घ जीवनको राज रहेको विभिन्न संघसंस्थाको रिपोर्टले जनाएको छ ।